Dhimmi Oromoo kan dursa argachuu qabu otuu jiruu maaliif dhimmoota biroorratti yeroo keenya fixna? | Oromo Freedom News and Views
← The Wonderful Cushitic Oromia: Naming is Identifying
8th Day of Peaceful Demonstration staged by Oromo refugees in Egypt in front of UNHCR Cairo →
Yeroo ammaa, uummatni Oromoo biyya keessattis ta’ee biyya alaa tokko tokko keessatti rakkoolee hamaadhaan xaxamee otuu jiruu; lammiileen Oromoo manoota hidhaa Wayyaanee keessatti dararamaa otuu jiranuu; uummatni keenya qayee issaarraa buqqayee rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa otuu jiruu; bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa keessatti Sumaaleen uummata keenyarratti duultee lafa isaarraa ari’aa otuu jirtuu; lafti keenya Wayyaaneedhaan gurguramtee dhumaa otuu jirtuu; naannolee(environment) keenya badiin irra gahaa otuu jiruu;walumaagalatti gabrummaa yoomiyyuu caalaa hamaa ta’e keessa otuu jirruu; dhimmoota gurguddoo dursa argachuu qaban kana dhiisnee ykn dagannee, waan xixiqqoorratti yeroo, beekumsa, dandeettii fi humna keenya balleessuun bu’aan isaa eenyuuf ta’a jennee itti yaadnee jirraa? Rakkoolee jiranirratti rakkoolee biroo ofitti daballee sababa kanaan qabsoo bilisummaa keenyaa laaffisuuf yoo ta’e malee, waan dursa argachuu hin qabneef dursa kennuun Oromoof bu’aa hin fidu.